Zvimwe zvitsva 0.0.3
Kurume 7, 2009 kubudikidza chipo 3 Comments
Nhasi isu kusunungura shanduro itsva kuti anowedzera rutsigiro maviri zvinhu. Wokutanga kukwanisa kuwana rakashandurwa RSS Feeds, ose mushandisi inoda kuita nokunyora magwaro kuti chikafu pamusoro rakashandurwa peji.
Chechipiri chine kuvandudzika pakushandurwa inowanikwa iyo rinobvumira mushanduri kuwana mazano kubva makombiyuta turusi (kushanda shandurudzo yegoogle) uye kurishandisa somubatsiri nokuda rokushandura muitiro.
Tichiri yakazaruka kwazvo mazano enyu, chete nesu runhare.
Update – 08/03 – Munhu nematambudziko kugadzwa, kusvikira isu kusunungura rinotevera Version, ndapota gadza shanduro 0.0.2 wokutanga pane ndiwedzere kuva 0.0.3
Ina Under: Software Updates Tagged With: shandurudzo google, rusununguko, RSS
Kurume 7, 2009 pa 11:47 pm
Kurume 8, 2009 pa 3:16 ndiri
Dave Hume anoti
Kurume 13, 2009 pa 9:50 ndiri